दसैं « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
वसन्तपुरको दसैंघरमा पनि राखियो जमरा
काठमाडौं, कात्तिक १ । नवरात्रको पहिलो दिन आज घटस्थापना । घटस्थापनाको अवसरमा नेपालीहरुको घर-घरमा बडादसैंको जमरा राखिएको छ । दसैंको पहिलो दिन घटस्थापनाका अवसरमा हरेक नेपालीको घर-घरमा जमरा राख्ने गरिन्छ
काठमाडौं, कात्तिक १ । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वस्थ खसी-बोका चिनेरमात्रै खरिद गर्न उपभोक्ताहरुलाई आग्रह गरेको छ । महानगरपालिकाका पशुसेवा महाशाखा प्रमुख डा. अवधेश झाले बजारमा आनुगमन गरी स्वस्थ र अस्वस्थ खसी-बोका
दसैंपछि कांग्रेसको आन्दोलन
काठमाडौं, असोज ३० । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियत्रणका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलन गर्ने भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार महामारीको
पाँचखालमा विद्यार्थी र शिक्षकलाई १५ दिन बिदा
काभ्रे, असोज ३० । पाँचखाल नगरपालिकाले कोरोनाभाइरसबारे समुदायमा जनचेतना जगाउन विद्यार्थी र शिक्षकलाई १५ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि यही असोज ४ गतेबाट स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदन्ड पालना
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक दशैं, तिहारपछि: प्रवक्ता शर्मा
काठमाडौं, असोज २८ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक दशैं, तिहारपछि बस्ने भएको छ । यसअघि दुईपटक मिति तय भएर स्थगित भएको बैठक दशैं, तिहारपछिमात्रै बस्ने भएको हो । कोरोनाको
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति ‘बैठक दशैंअघि असम्भव’ (भिडियो रिपोर्ट)
काठमाडौं, असोज २८ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न नसक्दा पार्टीको आसन्न १४औं महाधिवेशन थप अन्योलमा परेको छ । कार्यतालिकाअनुसार फागुनमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म पार्टी समायोजनका काम नै
बामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ दसैंपछिलाई धकेलियो
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई दसैंपछि मात्रै हुने भएको छ । संवैधानिक ईजलाशमा सुनुवाई भइरहेको गौतमको मुद्धामा अदालतका न्यायाधीशमा कोरोना देखिएपछि गत
संक्रमण रोकथामका योजना खोइ ?
काठमाडौं, असोज २६ । विश्व महाव्याधिकोरुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नेपालमा भयावह बन्दै गएको छ । तर, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भने सरकारको उपस्थिति कमजोर सावित भएको छ । सुरुमा एकजनामात्र
धनगढी बसपार्क क्षेत्र सुनसान, अग्रिम टिकट बुकिङ नखुल्ने
धनगढी, असोज २४ । कोरोना महामारीको जोखिमका कारण यस वर्ष दसैंका लागि घर जाने यात्रुहरुको कमीका कारण बसपार्कहरु सुनसान छन् । विगतमा दसैं सुरु नहुँदै कैलालीको धनगढी बसपार्कमा चहलपहल सुरु
कालोबजारी गर्नेलाई अब कैद : मन्त्री भट्ट
कैलाली, असोज २० । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कालोबजारी गर्नेहरूलाई जरिवनामात्र नभइ कैद सजाय गर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार धनगढीमा प्रेस संगठनद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भट्टले पछिल्लो